Goloolka jiifka G-6
Shaxda G-6 oo ay kuxiran yihiin bir bir-diiran oo aan sal iyo miisaan lahayn G-6 Cabirka: L1500 * W700 * H800mm muujinta ugu weyn: 1. Dhismaha isku-dhafka ah ee birta leh iyo bir aan saarnayn iyo salka; 2. saddex khaanadood oo sita, laba koob oo quful leh
Goloolka jiifka G-19
Kabadhka qalabka qalabka 2-albaab oo leh guluubka birta ee birta leh G-19 Cabbirka: L960 * W400 * H1750mm muujinta ugu weyn: 1. Dhismaha isku-dhafka ah ee birta leh saldhig birta ka samaysan; 2. laba albaab oo galaas la xiri karo, oo leh shan shelf oo la hagaajin karo
Goloolka jiifka G-9
Kabadhka qalabka birta ee birta ah ee G-9, Nooca I G-9 Cabirka: L960 * W400 * H1750mm Muuqaalka ugu weyn: 1. Dhismaha birta; 2. Qeybta sare oo leh laba albaab quraarado la xiri karo, oo leh 3 armaajo lagu hagaajin karo; 3. Qaybta hoose oo leh hal bakhaar weyn oo la xiri karo
Qolka jiifka jikada D-13
D-13 Qolka jiifka sariirta Phenolic D-13 Cabbirka: 480 * 470 * 780mm Astaamaha ugu muhiimsan: 1. Qalabka injineernimada Phenolic 2. Hal guddi cunto, hal baako, hal albaab yar 3. Iyada oo afar caster mid walbaa leh biriiga
Qolka jiifka jikada D-14
D-14 Golool jiifka jiifka Phenolic D-14 Cabbirka: 480 * 470 * 780mm Astaamaha ugu muhiimsan: 1. Maaddada injineernimada Phenolic 2. Hal guddi cunto, hal khaanad, hal albaab yar.
ABS iyo golaha wasiirada ee birta leh
Qolka jiifka sariirta leh ee bir-birta aan fiicnayn iyo salka